Archive du 17-mars-2022
Governemanta Tsy sahy nanala an’i Tinoka sy Lalatiana ny Filoha
Samy niandry izay ho endrika vaovaon’ny governemanta fahaefatra amin’izao fitondrana Rajoelina izao ny Malagasy.
Ny tonta no avadibadika 5 ny mpikamban’ny governemanta vaovao
Minisitra 9 no notendrena hanandrafitra sy hameno ny toerana banga tao anatin’ny governemanta, ka misy amin’ireo no efa minisitra teo aloha, misy ny nafindra toerana.
Salon des études internationales Hanampiana ireo te hianatra any ivelany
Manitsaka ny andro faharoa etsy amin’ny Centre commercial Akoor digue anio Alakamisy 17 Martsa ilay Salon des etudes Internationales andiany faha-12 karakarain’ny Mada Jeune.
Fikambanan’ny Silamo Malagasy Hiantso mpiara-miasa ara-toekarena
Tontosa tany Mahajanga ny herinandro lasa teo ny lanonana ofisialy nametraha ny filan-kevi-pirenenan'ny Fikambanan'ny Silamo Malagasy (FSM) sy ny birao vaovao amin’ny toerany, izay tarihin’ny Filohany Abousoary Saïd Arsène.
Fampanarahan-dalàna ny “taxi-moto” Nitsangana ny “Association Kodiaran-droa”
Nampahafantarina omaly ny fitsanganan’ny fikambanana antsoina hoe “Kodiaran-droa”. Manana ny “recépicé” ara-dalana sy sata mifehy azy izy izao, hoy ny filohany, Fulgence Ramamonjisoa.
Fahadioavana sy fidiovana Kaominina 3 voafidy ho fitaratra
Isan’ireo sampan-draharaha tsy miankina na ONG iraisam-pirenena manana sampana eto Madagasikara ny GRET, hoy ny tompon’andraikitry ny asa vaventy na “activite BTP” eo anivon’ny tetikasa, Razakahasimanana Daniella.
Fitondrana Rajoelina Mihalalina ny kiantranoantrano
Na dia efa niteraka resabe aza nialohan’ny fivoahan’izao governemanta vaovao izao ny endrika kiantranoantrano ao anatin’ity fitondrana Rajoelina ity dia toy ny rano natondraka an-damosin’ny gana ireny.